Eebbe Dheryasameeyaha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Xusuusnow markii Ilaah u fiirsaday Yeremyaah u fiirsaday dheryasameeyaha (Jer 18,2-6)? Ilaah wuxuu isticmaalay muuqaalka dheryasameeyaha iyo dhoobada si uu na baray cashar cabsi leh. Farriimaha la midka ah ee adeegsada sawirka dheryasameeyaha iyo dhoobada ayaa laga heli karaa Ishacyaah 45,9 iyo 64,7 iyo Rooma 9,20-21.
Had iyo jeer ma ahayn barid wanaagsan. Markii hore waxaan ahaa buro aan rasmi ahayn oo dhoobo la qooyay ah. Laakiin qof ayaa i geliyay disc wuxuuna bilaabay xawaaraha disc si xawli ah oo waan wareeriyay. Sidii ayaan u jeestay, isu ururiyey, isu ururiyey oo i jeexay. Waan qayliyey: "Jooji!" Laakiin waxaan helay jawaabta: "Weli ma aha!".
Ugu dambayntiina daaqaddii ayuu joojiyey oo foornadii buu i geliyay. Way ka sii kululaatay oo sii kululaatay illaa aan qayliyey: "Jooji!" Mar labaad waxaan helay jawaabta "Weli ma!" Ugu dambayntiina foornadii buu iga qaatay oo wuxuu bilaabay inuu ii dalbado rinji. Qiiqa ayaa i xanuumay oo mar labaad ayaan qayliyey: "Jooji!" Mar labaadna jawaabtu waxay ahayd: "Weli ma aha!".
Markaas ayuu foornadii iga soo saaray ka dib markii aan qaboojiyey, ayuu miiska hor i saaray muraayad. Waan la yaabay! Dheryasameeyuhu wuxuu wax wanaagsan ka sameeyay dhoobada aan macbudka lahayn. Dhammaanteen innagu waxaynu nahay laamo dhoobo ah, miyaanay ahayn? Adoo dusha naga saaray dusha dheryasameeyaha dusheeda, sayidkeenna dheryasameeyaha ayaa ina siiya abuur cusub oo aan ku noqon karno doonistiisa!
Markuu ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee maanta jira, oo aan umuuqdo inay marar badan la kulmaan, Bawlos wuxuu qoray: «Taasi waa sababta aannu u daalin; laakiin haddii ninkeenna dibadda ahu uu maansado, waxa gudaha xaggiisa ka soo cusboonaaday maalinba maalinta ka dambaysa. Sababtoo ah dhibaatadeena, oo ah mid ku meel gaadh ah iyo iftiin, waxay abuurtaa daa'in weligeed ah oo ka sarreysa dhammaan sharaftii weynayd, innaguna, taas oo aynaan ku arkin wixii la arki karo, laakiin aan la arki karin. Maxaa yeelay waxa muuqda waa ku meel gaadh; laakiin waxa aan la arki karin waa weligiis (2 Korintos 4,16: 17).
Rajadayadu waxay kujirtaa wax ka baxsan adduunkan hada jira. Waxaan aaminsanahay ereyga Ilaah, waxaan u aragnaa dhibaatooyinkayaga hadda jira inay yihiin kuwa fudud oo waqti ku habboon marka la barbar dhigo waxa Ilaah noogu kaydiyey. Laakiin tijaabooyinkan ayaa qayb ka ah habka nolosha Christian. Rooma 8,17: 18 waxaan ku aqrinaa: «Laakiin haddaan caruur nahay, waxaynu nahay sidoo kale kuwo dhaxla, inay yihiin kuwa dhaxla Ilaah iyo kuwa isla dhaxalka ah ee Masiix, haddii aan isaga la xanuunsanno, si aynu innaguna ammaan ugu wada lahaanno. Maxaa yeelay, waxaan aaminsanahay in xilligan la silcayo aan lagu tirinaynin ammaanta la muujin doono.
Siyaabo badan ayaan ula wadaagnaa silica Masiixa. Qaar, dabcan, waxay u shahiiday aaminaaddooda. Si kastaba ha noqotee, inteena badan waxaan la wadaagnaa silica Masiixa si ka duwan sidii hore. Saaxiibbadaa way na khiyaanayn karaan. Dadku had iyo jeer way fahmaan annaga, nooguma mahad celinayaan, ma na jecla mana jecla xitaa kuwa na xadgudbo. Hadana, sidaan u raacno Masiixa, waxaan cafinaa sida uu noo saamaxay. Isagaa naftiisa u huray markii aan nahay cadaawayaashiisa (Rooma 5,10). Taasi waa sababta uu noogu yeerayo inaan sameyno dadaal gaar ah si aan ugu adeegno dadka na dhibaateyn, na qiimeynin, nama fahmin ama nalama jecla.
Kaliya “naxariistiisa darteed” ayaa naloogu yeedhay inaan noqonno “dhibbanayaal nool” (Rooma 12,1). Ilaah wuxuu inaga dhex shaqeeyaa Ruuxa Quduuska ah si uu noogu beddelo muuqaalka Masiixa (2 Korintiyos 3,18), wax si aan la qiyaasi karin uga fiican burburka dhoobada qooyay!
Ilaah wuu ku firfircoon yahay midkeen kasta, dhammaan dhacdooyinka iyo caqabadaha la yimaada nolosheena. Laakiin wixii ka dambeeya dhibaatooyinka iyo tijaabooyinka aan wajahayno, ha ahaato mid ku lug leh caafimaad ama dhaqaale ama lumis qof la jecel yahay, Ilaah baa nala jira. Way na buuxisaa, na beddeshaa, way na qaabaysaa oo na qaabaysaa. Ilaahay waligiis naga tagi maayo ama naga maqnaan doono. Isaga wuu inala jiraa dhamaan tartamada oo dhan.